Uyicheba njani inkwenkwe yenkwenkwe- Fumanisa onke amanyathelo akhe | Amadoda aQinisekileyo
Ukusika iinwele zenkwenkwe kunokuba ngumceli mngeni, kodwa hayi into engenakwenzeka. Abazali abaninzi bafunda ukusika iinwele zabantwana babo, nokuba zenziwe ngesandla ngesikere okanye ngesitshetshe. Abanye bajonge indlela yokuqalisa, kungoko sinokunikezela ngendlela yokucheba iinwele zenkwenkwe ngendlela ebonakalayo neqinisekileyo.
Inqaku leli, ukuze wenze umsebenzi ngokufanelekileyo, umonde kunye nobuchule kufuneka bulawuleke. Ekuqaleni kunokubiza indlela yokusika into eyenziwa okokuqala, kodwa ekuhambeni kwexesha le ndlela inokuba lula ngakumbi kunokuba ucinga. Ukuba ufumanisa ukuba oku akuyona into yakho, unokuhlala ubeka umsebenzi wakho kwizandla zengcali.
1 Yintoni esiyifunayo yokucheba iinwele zenkwenkwe?
2 Indlela yokusika iinwele zomntwana inyathelo ngenyathelo
3 Ukucheba iinwele ngesitshetshe
Yintoni esiyifunayo yokucheba iinwele zenkwenkwe?
Ukucheba iinwele zomntwana udinga isikere esihle esibukhali. Eyona nto ifanelekileyo iya kuba yileyo ikhethekileyo yokucheba iinwele, ezifanelekileyo kwimilo yesandla, encinci kwaye inde. Itawuli ebhityileyo ukuba ibhijelwe entanyeni nasemzimbeni womntwana, ukuze iinwele eziwelayo zingamkhathazi.
Ikama kungangcono kunebrashi, ukutshiza amanzi ukuze iphoswe kwizinwele eziye zoma kwaye enye itawuli ukususa amanzi angaphezulu.
Incakuba yombane ukucheba iinwele kwakhona ilungele ukucheba iinwele. Iya kuhlala igqibezela naziphi na iinkcukacha ngcono kakhulu kwaye iya kucheba zonke iindawo ofuna ukuzisika.
Khangela elona xesha lilungileyo losuku Ukuze bachebe iinwele zabo, abantwana badla ngokungaphumli kwaye asinakusoloko sibaqinisekisa ngayo yonke into. Musa ukuzama ukuyenza xa umntwana enomsindo; ukulila okanye ukuba nomsindo, ekugqibeleni usenokuba nomsindo ngakumbi.
Elinye icebiso kukukwazi ukucacisela umntwana ukuba uya kuba nexesha lokonwaba, ukuba isiphumo sokulinda kwaye oko kusekho iya kuba nexabiso. Ukuba ungumntwana ongazinzanga kakhulu, ungamnika into endinokonwaba ngayo, ukusuka kwinto yokudlala encinci, ukuhlekisa okanye itekhnoloji yethu efihlakeleyo. Kodwa olu hlobo lokuzonwabisa lubanika njengento yokugqibela, xa umntwana sele eqala ukukhathazeka ngokulinda.
Indlela yokusika iinwele zomntwana inyathelo ngenyathelo
Sikhetha indawo efanelekileyo apho intloko yomntwana iphakame ngokwaneleyo apho sinokucheba kakuhle iinwele zabo. Kufanelekile ukuba unayo intloko ihlanjwe kwaye ngenxa yoko imanzi. Siza kususa umswakama ogqithiseleyo ngetawuli kwaye siya kugubungela enye itawuli emzimbeni womntwana, sigxininisa ukuyibeka entanyeni ukuze iinwele zingangeni phakathi kwentamo.
Izinwele sizidibanisa kakuhle ukuze zingadibani. Siza kuqala ngenxalenye ephezulu yeenwele, sithatha isitshixo ngokukhiya kunye nokusika iziphelo. Sibeka zonke iinwele zikanywe ngasemva kwaye siphawula umgca embindini. Sidibanisa ecaleni kwentloko indawo esiza kuqala ukuyisika.
Yiza ukuchola iinwele phakathi kweminwe isandla ngesandla kwaye uchebe iinwele. Siya kuhlala sihlonipha ukuphakama okufanayo kweenwele phakathi kweminwe, ukuze yonke into iphele ngokulinganayo, kodwa sisika kancinci kancinci.
Siza kusika ukusuka emacaleni entloko ukuya embindini kwaye siya kuhamba senza intshukumo efanayo, sithatha iinwele phakathi kweminwe kunye nokusika iinwele ezingaphezulu. Igqitywe tu ukugqiba amacala kunye nenxalenye esezantsi phakathi kwesithsaba kunye nape. Ezi ndawo ziya kuba nenqanaba eliphantsi kakhulu kunezinye iinwele kwaye ngenxa yoko sinokuzinceda ukusetyenziswa kwencakuba.
Kuhlala kuphela ukugqiba inxalenye ye-bangs, i-sideburns kunye nommandla we-nape. Singayenza ngesikere senza ukusikwa okuthe tye, kodwa kuthe nkqo. Le nxalenye inokwenziwa kwakhona ngencakuba. Uthatha iziqwenga zeenwele ngekama, uzikame uye ezantsi kwaye ulungelelanise kakuhle iinwele ezishiyekileyo. Kuba indawo yomphetho inokwenziwa ngokufanayo, kodwa ke uyigqibezele ngesikere senza amanxeba amancinane kunye nobude obahlukeneyo.
Ukucheba iinwele ngesitshetshe
Silandela amanyathelo afanayo nasekuqaleni, ukugcina iinwele zimanzi. Siza kuqala ngokubeka inombolo yentloko 3 yomatshini kwaye siya kuzicheba iinwele ukusuka ezantsi ukuya phezulu, ejikeleze intloko yonke. Siza kushiya indawo ephezulu ixesha elide kwaye emva koko siya kugqibezela kamva.
Sibeka inombolo yentloko 4 ukudibanisa indawo yamacala kunye nenxalenye ephezulu, rhoqo kunye nentshukumo efanayo, ukusuka ezantsi ukuya phezulu. Indawo inombolo yentloko 2 kwaye uhambe ngaphezulu kwayo yonke imijikelezo, kunye necala eliqhekezayo kunye nendawo yenape.
Umphezulu wentloko kungcono ukuyisika ngesikere, Siza kuthatha imicu yeenwele njengakumanyathelo angaphambili. Indawo yomphetho iya kugqitywa ngcono kakhulu ngokwenza ukusika okuncinci kwe-oblique okanye ukunqamleza, ukuze unganiki luvo lwe-rectum epheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela yokucheba iinwele zenkwenkwe